Ny fahalavorariana amin'ny marika dia maty | Martech Zone
Ny fahalavorariana amin'ny marika dia maty
Alatsinainy, 1 Jona, 2009 Alakamisy, Jolay 23, 2015 Douglas Karr
Tao anatin'izay herinandro vitsivitsy lasa izay dia niresaka tamina orinasa vitsivitsy aho izay manandrana mametraka tetika handresena ny valin'ny motera fikarohana ratsy momba ny orinasan-dry zareo, ny vokatra na ny serivisin'izy ireo. izany azo atao taloha mitazona marika tonga lafatra taona lasa izay. Raha sendra zavatra ratsy dia afaka mandoa vola ianao mba hialana amin'ireo olana na hamafana azy ireo ao ambanin'ny karipetra mba tsy hisy hahita azy ireo.
Tsy mandeha intsony io. Ny fisongadinan'ny tambajotra sosialy, tranokala fandinihana orinasa ary fitorahana bilaogy dia nanome ny mpanjifa sosotra sabatra goavambe hikapoka ny fon'ny marikao. Mikorontana ny mpanjifa (indraindray noho ny antony tsara) ary mahatsiaro tsy afa-manoatra ny mpitantana ny marika.
Ny fahalavorariana amin'ny marika dia maty.
Tsy ny safidin'ny mpitantana marika na ny CMO intsony no mitazona ny fahamendrehan'ny marika. Andraikitry ny mpiasa rehetra ao amin'ny fikambanana. Aza manandrana mamaky ireo hazo lehibe na baomba mandatsa-dranomaso koa. Mpisolovava orinasa iray tafahoatra ny fandefasana a ajanony ary maty afaka mametraka ny Vokatry ny streisand mihetsika.
Ireo orinasa ireo dia mijery ahy tsy afa-manoatra, maniry ahy hanome toky azy ireo fa afaka manao izany aho manamboatra ny olan'izy ireo. Tsy mandeha toa izany. Tsy hiasa toy izany intsony izy io. Ny fahalavorariana amin'ny marika dia maty. Ny fitantanana ny laza, ny mangarahara ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa lehibe no fitaovan'ny mpiaro ny marika. Raha te hanana laza tsara ny orinasanao dia manomboka amin'ny serivisy mpanjifa lehibe.
Raha te hamono a ratsy tantara ao amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana, mila miasa mafy ianao amin'ny maha orinasa anao tsara tantara kosa no mahatonga ny pejy valiny ho solony. Be, sarotra kokoa.
Toy izany koa, ny andro fanodikodinana ny mpanjifa toy ny hoe tsy misy zombie tsy manan-tsaina dia vita ihany koa. Ny mpanjifa izao dia mamaky, mihaino, mifanakalo hevitra ary mikaroka ny fanapahan-kevitr'izy ireo nividy. Ny vaovao tsara dia ny mpanjifa aza manantena fahalavorariana intsony… fa manantena ny hanao ny marina kosa izy ireo. Raha manana pejy fanamarihana vokatra feno kintana 5 ianao, dia naseho ny fikarohana sasany fa tsy ho hitan'ny mpanjifa ho azo itokisana ireo tsikera. Raha lazaina amin'ny teny hafa, mety ho very mpanjifa ianao raha toa ka tonga lafatra ny marikao. Wow.
Marika tsy fahatanterahana
Tsy azontsika fehezina ny hafatra raha tsy hoe afaka miaina mifanaraka amin'ny antenaintsika izay tiantsika asongadin'ny marika izahay. Tsy afaka manafina ny lesoka intsony isika, mila misokatra momba izany isika. Ny taonan'ny tsy fahatanterahana marika eo amintsika - ary raha te hahomby dia tsy maintsy misokatra sy manao ny marina momba ny vokatra sy serivisinay izahay… na tsara na ratsy. Rehefa tsy mifanaraka amin'ny antenaina ny orinasanao (izay hitranga) dia tsy maintsy mihetsika haingana ianao mba hanitsiana ilay olana. Mamporisika anao aho hamaly ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ny taninao manokana, na izany aza. Tariho ny fifamoivoizana izay anananao mikrô fa tsy manome valisoa loharano iray izay mety tsy mendrika ny hisongadina.
Raha manana valin'ny maotera fikarohana ratsy ny orinasanao, amporisiho ny mpanjifa tompon-daka amin'ny marikao hampiroborobo anao amin'ny tranokalan'izy ireo manokana, ny mombamomba azy ireo, ny tamba-jotra ary / na ny bilaogin'izy ireo. Tsy afaka manary zavatra ratsy amin'ny Internet intsony ianao, fa afaka izany hampiroborobo ny lafy tsara.
Rehefa mifanaraka amin'ny andrasana ny orinasanao dia ho hitanao fa mora kokoa ny mitantana ny marikao amin'ny fomba mandaitra.
Tags: marikamarika andrasanatsy fahatanterahana marikafahalavorariana marika
Mitsoka ve ny marketing an'i Apple?
Pink: Rehefa barea ny orinasa
1 Jun 2009 amin'ny 2:35 AM
Lahatsoratra tsara toy izany Doug. Tsy afaka mifanaraka aminao intsony aho. Ny tontolon'ny mpitantana ny marika dia niova na tian'izy ireo izany na tsia. Izy ireo (sy isika) dia hahomby ary tsy hahomby amin'ny fahafahany misokatra sy manao ny marina momba ny vokatra sy serivisin'izy ireo? tsara, ratsy, na tsy miraika.